Ogaden News Agency (ONA) – Shan Qof oo Ku Dhimatey Qarax Ka Dhacay Muqdisho.
Shan Qof oo Ku Dhimatey Qarax Ka Dhacay Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ March 26, 2018
Qarax xooggan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhaw isgoyska Sayidka oo ay bar koontarool ku leeyihiin ciidamada Madaxtooyada, halkaas oo aan wax badan ka fogeyn xarunta Baarlamaanka.
Wararka laga helayo Shaqaalaha gar-gaarka deg degga ah ayaa sheegaya in qaraxa ay ku geeriyoodeen shan qof dhaawucuna uu hadda gaadhayo todoba qof. Qaraxa waxaa loo adeegsaday gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay meel ku dhow koontaroolka ciidamada oo aan sidaa uga fogeyn xarunta wasaaradda arrimaha gudaha.
Isu socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsiga ayaa hakad galay qaraxa kadib, iyadoo gaadiidka nooca gurmadka deg-dega ah ay daad gureeyeen dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Todobaadkii hore ayey ahayd markii isla goob ku dhaw halka qaraxu ka dhacay laga fuliyey weerar kale oo ay ku geeriyoodeen dad ka badan 14 qof. Ururka al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkan.